प्रीय जिन्दगी - कथा | Kavyalaya - काव्यालय
by Raaj Aaryan April 14, 2019
माथी-माथी उडिरहेको थियो भर्खरै बोट मुक्त कपास। निकै सपना बोकि हृदय भित्र। पारी क्षितिजको चुच्चोमा पलेटी कसि आफ्नो सफलताको कथा सुनाउने सपना बोकि। हावाले उस्लाई निकै सहयोग गरिरहन्थ्यो उढ्न लाई मानौ हावा उस्को असल मित्र हो। हावालाई नै आफ्नो सर्वश्व सुम्पेर आँखा चिम्मगर्दै उडि रह्यो उडिरह्यो। उस्लाई थाहै भएन कि हावाले आफूसँग केही सेता बादल बोकि ल्याएको थियो। सेता बादल कालामा परिणत भए। केही छिनमै बर्षिन थाले बादल। थोपासँगै कपासका सपना, आशा अनि बिश्वास भुई भरी छरप्रष्ट बने।
सात बर्ष भयो निताको बिहे भएको। बिहेको पाँचौ महिनामा नै श्रीमान बिदेश पसे। केहि बर्षको अन्तरमा अशोक ओहोर दोहोर गरिरहन्छ। पहिलो सन्तान खुसिको थियो। so called मायाको चिनो। दोश्रो सन्तान मुर्छित प्रेम बिउझाउने प्रयास स्वरुपको कोसिस। असफल कोसिस। अशोक बर्ष भरी भरपुर मेहनत गर्छ। आफ्नो परिवारको सुखी भबिश्य कोर्छ। शरीर अनि मनमा चनचलता बोकि घर फर्कन्छ। निताको बर्षका दिनहरु मध्य कठिन दिनहरु श्रीमान घर रहदाका हुन। बिशेषत रातहरु। निताको नजरमा उ हरेक रात बलात्कृत हुनु परेको छ। अशोकको नजरमा उस्ले प्रत्यक रात प्रेम पाईरहेको छ।
कैले ढुकुर बिदेश उढ्ला भनी अलि पर मुखभरि र्याल चुहाइ पर्खिरहन्छ गिद्द। जस्लाई निताले प्रेमको नाम दिएकि छे। नजरियाका कुरा हुन निताको लागि गिद्द अशोक, अशोकको लागि गिद्द कथित निताको प्रेम। long distance relationship मा यस्तो भैरहन्छ हो?? हुन त एउटै बिछ्याउनामा पुठ्ठा जोडि सुत्ने गरेकाछन जोडिहरु। यो पनि त long distance relationship नै त हो।
प्रमिला 20 बर्षकी भईन। मुढी स्वाभाब कि उनको परिवार धनाढ्य छ। आधुनिक स्वतन्त्रता मन पराउने प्रमिला आधुनिकता भोगका निम्ति केही महिना देखि बिदेशमा छिन। छोरिलाई नकारात्मक आधुनिकता बाट टाढा राख्न खोज्नु गलत हो र? या सकारात्मक आधुनिकताको चाह गर्नु गलत?? अनि सकारात्मक र नकारात्मकको अन्तर के?? यहि दुबिधामा उल्झिरहेछ परिवार र प्रमिलाको दैनिकी।
दिनभरिको वर्षा थामिएको छ। सुनौलो साझ फर्की आएको छ। दुई बर्ष भयो अशोक घर नगएको। दिनभरको काम बाट निकै थाकेको अशोक आवाज लगाउछ – प्रमिला, get meaglass of wine. प्रमिला रातो one piece मा सजिएर एक बोतल wine दुई ग्लास अनि केही सिग्रेट ल्याउछिन। दुबैले ग्लास जुधाउछन, हृदय जुधाउछन, शरीर जुधाउछन। आजको रात खुब सन्तोषको श्वास फेर्छ। भुईमा छटपटाईरहेको कपासले आफू सगै बोकि ल्याएको बिजलाई नयाँ श्रीजनाकालागि प्रेरित गर्छ। आजकल प्रमिला र अशोकका गमला भरी कपास फुलेका छन।
भुपिनको नयाँ कोसेली “मैदारो”
फस्ट इम्प्रेसन च्यालेन्ज
खबर, कहर र जहर
बार्दली र सिगरेटहरू
कपटी प्रियतमलाई चिठी
पहिलो रातको सपना
मेरी प्रिय उनी !
“दशैं आयो त ! घर आउने हैन ?”
भूपिनको दशैं र तिहार
UNDER THE SHADOW | THE REAL HORROR